Indiana crypto fifanakalozana Coinsecure voajirika - Blockchain News
Indiana crypto fifanakalozana Coinsecure voajirika
Coinsecure, Indiana cryptocurrency fifanakalozana, hoy efa ho $ 3M no nangalatra hiala amin'ny Bitcoin kitapom-batsy, ny lehibe indrindra dia voalaza ao amin'ny firenena lavitra ny tsena vola nomerika.
Coinsecure, izay manana ny 200,000 mpampiasa raharaham-barotra eo amin'ny sehatra isan'andro, nilaza fa manodidina 438 BitCoins, izay voatahiry ao amin'ny virtoaly voaro tenimiafina-kitapom-batsy ireo Nafindra nankany an toerana tsy fantatra ao amin'ny aterineto araka ny antsipirihany dia tafaporitsaka-tserasera.
"Malahelo izahay mampahafantatra anareo mba Bitcoin fa ny vola no miharihary, ary toa Nafindra avy amin'ny lahateny iray izay ny fanaraha-maso dia eny ivelan'ny,"Amin'ny vahoaka nanao fanambarana navoaka tao amin'ny vohikalany.
Coinsecure nilaza fa ho onitra ho an'ny mpanjifa avy amin'ny efa misy fatiantoka-bola.
Square ny ataon'ny mpiara-to-Pee ...
Previous Post:Hoy ny manam-pahaizana silamo dia mifanaraka tsara Bitcoin ambanin'ny lalàna Sharia
Amazon crypto raki-daza ho an'ny angon-drakitra mifandraika patanty mikoriana
Insurance broker Marsh miasa miaraka IBM amin'ny sehatra Blockchain